UYIFUMANA PHI KWAYE PHI I-SWAPFOLIO (I-SWFL) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Uyifumana phi kwaye phi i-Swapfolio (i-SWFL) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 1: Bhalisa kwi-Fiat-to-Crypto Exchange
Inyathelo 2: Thenga i-ETH ngemali ye-fiat
Inyathelo 3: Dlulisela i-ETH kwiAltcoin Exchange
Inyathelo 4: Idiphozithi ye-ETH yokutshintshiselana
Inyathelo 5: Urhwebo lwe-SWFL
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-SWFL ngokukhuselekileyo kwii-wallet zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lwe-SWFL
I-SWFL ichazwa njengethokheni yokusetyenziswa kwe-Swapfolio app, ipotifoliyo engaguqukiyo kunye nesiphelo sentengiso. I-Swapfolio ibonelela ngeempawu zokurhweba ngakumbi kunye nokufumana umvuzo kubo bonke abathengisi beethokheni.
Ixabiso langoku le-SWFL yi- $ 0.10 kwaye ikwindawo ye-2850 kwi-Coinmarketcap kwaye kutshanje inyuse iipesenti ezingama-38.22 ngexesha lokubhalwa.
I-SWFL idwelisiwe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Nangona kunjalo, usenokuyithenga ngokulula le ngqekembe ngokuqala ngokuthenga i-Ethereum kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunika ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kuhambahamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-SWFL .
Kuya kufuneka uqale uthenge enye yeemali ezinkulu zokugcina imali, kule meko, i-Ethereum (ETH). Kweli nqaku siza kuhamba ngeenkcukacha ezimbini zotshintshiselwano oluqhelekileyo lokusetyenziswa kwe-fiat-to-crypto, Uphold.com kunye neCoinbase. Zombini ezi zitshintshiselwano zinemigaqo-nkqubo yazo yemirhumo kunye nezinye izinto esiza kudlula kuzo ngokweenkcukacha. Kuyacetyiswa ukuba uzame zombini kwaye ufumane eyona ikulungeleyo.
Bhalisa i-Coinbase Bhalisela ukuBamba
Khetha i-Fiat-to-Crypto Exchange ngeenkcukacha:
I-Coinbase yenye yezona ndawo zinkulu zotshintshiselwano nge-crypto ezamkela idiphozithi ze-fiat. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukuze ubhalise kwi-Coinbase kwaye uyakufumana inani lasimahla le- $ 10 yexabiso le-BTC emva kokuthenga i-cryptos eyi- $ 100.
Bhalisa i-Coinbase kwaye ufumane i-10 yeedola! Bonisa iinkcukacha Amanyathelo ▾
Chwetheza imeyile yakho kwaye ucofe 'Qalisa'. Qiniseka ukuba unikezela ngegama lakho lokwenyani njengoko iCoinbase izakuyidinga ukuqinisekisa iakhawunti. Khetha iphasiwedi eyomeleleyo ukuze iakhawunti yakho ingabinabungozi kwabagculeli.
Uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa. Yivule kwaye ucofe kwikhonkco elingaphakathi. Uya kuthi emva koko ubonelelwe ngenombolo efanelekileyo yeselfowuni ukuseta ukungqinisisa kwezinto ezimbini (i-2FA), ngumaleko owongezelelweyo kukhuseleko lweakhawunti yakho kwaye kuyacetyiswa kakhulu ukuba ugcine eli nqaku livuliwe.
Landela inyathelo elilandelayo ukugqiba isazisi sakho. La manyathelo ayothusa ingakumbi xa ulinde ukuthenga iasethi kodwa njengawo nawaphi na amanye amaziko emali, iCoinbase ilawulwa kumazwe amaninzi anjengeMelika, i-UK ne-EU. Unokuthatha oku njengorhwebo usebenzisa iqonga elithembakeleyo ukwenza ukuthenga kwakho kwe-crypto kuqala. Iindaba ezimnandi zezokuba yonke into ebizwa ngokuba Yazi-abaThengi bakho (i-KYC) ngoku iyazenzekela kwaye akufuneki ithathe ngaphezulu kwemizuzu eli-15 ukuyigqiba.
Nje ukuba ugqibile ukwenza inkqubo ye-KYC. Uya kucelwa ukuba ungeze indlela yokuhlawula. Apha unokukhetha ukubonelela ngekhadi letyala / lokuthenga okanye usebenzise ugqithiselo lwebhanki. Uya kuhlawuliswa imali ephezulu xa usebenzisa amakhadi kodwa uya kwenza ukuthenga kwangoko. Ngelixa ukuhanjiswa kwebhanki kungabizi kakhulu kodwa kucothe, kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo, amanye amazwe aya kubonelela ngedipozithi yemali ekhawulezileyo ngentlawulo ephantsi.
Ngoku usete, cofa iqhosha u 'Trade' ngasekhohlo phezulu, khetha u-Ethereum kwaye uqinisekise ukuthengiselana kwakho ... kunye nemihlali! Uthengile nje okokuqala ukuthenga i-crypto.
Ukuba yenye yezona ndawo zidumileyo nezithandwayo zokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto, i-UpHold inezibonelelo zilandelayo:
Kulula ukuthenga nokuthengisa phakathi kweeasethi ezininzi, ngaphezulu kwama-50 kwaye usongeza
Okwangoku ngaphezulu kwabasebenzisi be-7M kwihlabathi liphela
Unokufaka isicelo sekhadi le-UpHold Debit apho unokuchitha khona ii-asethi ze-crypto kwiakhawunti yakho njengekhadi lesiqhelo ledebhithi! (I-US kuphela kodwa iya kuba se-UK kamva)
Kulula ukusebenzisa usetyenziso lweselfowuni apho ungarhola khona imali ebhankini okanye nakuphi na ukutshintshiselana kwe-altcoin ngokulula
Akukho ntlawulo ifihliweyo kunye nezinye iifizi zeakhawunti
Kukho umda wokuthenga / wokuthengisa iiodolo zabasebenzisi abaphambili
Ungaseta ngokulula iidiphozithi eziphindaphindayo zeDola yeXabiso leNdawo (DCA) ukuba unenjongo yokubamba ixesha elide
I-USDT, yenye yezona ndawo zithandwayo zixhaswa yi-USD (ngokusisiseko i-crypto exhaswa yimali eyi-fiat yokwenene ukuze ingabi bhetyebhetye kwaye inokunyangwa phantse njengokuba imali ye-fiat ikhonkxiwe nayo) iyafumaneka, oku kulula ngakumbi ukuba I-altcoin oceba ukuyithenga inee-USDT kuphela zokurhweba ngababini kutshintshiselwano lwe-altcoin ke akufuneki udlule kolunye uguqulo lwemali ngelixa uthenga i-altcoin.
Bhalisa kwi-UpHold ngoku! Bonisa iinkcukacha Amanyathelo ▾
Chwetheza imeyile yakho kwaye ucofe u 'Okulandelayo'. Qinisekisa ukuba unikezela ngegama lakho lokwenyani njengoko i-UpHold iyakulidinga kwiakhawunti kunye nokuqinisekiswa kwesazisi. Khetha iphasiwedi eyomeleleyo ukuze iakhawunti yakho ingabinabungozi kwabagculeli.
php susa kuluhlu ngamaqhosha
Landela inyathelo elilandelayo ukugqiba isazisi sakho. La manyathelo ayothusa ingakumbi xa ulinde ukuthenga i-asethi kodwa njengawo nawaphi na amanye amaziko emali, i-UpHold ilawulwa kumazwe amaninzi anjenge-US, i-UK ne-EU. Unokuthatha oku njengorhwebo usebenzisa iqonga elithembakeleyo ukwenza ukuthenga kwakho kwe-crypto kuqala. Iindaba ezimnandi zezokuba yonke into ebizwa ngokuba Yazi-abaThengi bakho (i-KYC) ngoku iyazenzekela kwaye akufuneki ithathe ngaphezulu kwemizuzu eli-15 ukuyigqiba.
Nje ukuba ugqibile ukwenza inkqubo ye-KYC. Uya kucelwa ukuba ungeze indlela yokuhlawula. Apha unokukhetha ukubonelela ngekhadi letyala / lokuthenga okanye usebenzise ugqithiselo lwebhanki. Unokuhlawuliswa imali ephezulu ngokuxhomekeke kwinkampani yekhadi lakho letyala kunye namaxabiso aguquguqukayo xa usebenzisa amakhadi kodwa uya kwenza ukuthenga kwangoko. Ngelixa ukuhanjiswa kwebhanki kungabizi kakhulu kodwa kucothe, kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo, amanye amazwe aya kubonelela ngedipozithi yemali ekhawulezileyo ngentlawulo ephantsi.
Ngoku usete, kwiscreen se 'Transact' phantsi kwe 'Ukusuka' ebaleni, khetha i-fiat currency yakho, emva koko kwi 'To' field khetha i-Ethereum, cofa ukujonga kuqala ukujonga ukuthengiselana kwakho kwaye ucofe uqinisekise ukuba yonke into ibonakala intle. .. kunye nemihlali! Uthengile nje okokuqala ukuthenga i-crypto.
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-SWFL yi-altcoin ekufuneka siyidlulisele kutshintshiselwano ukuba i-SWFL ingathengiswa. Apha ngezantsi luluhlu lotshintshiselwano olunikezela kurhwebo lwe-SWFL kwiibini ezahlukeneyo zentengiso, intloko kwiiwebhusayithi zazo kwaye ubhalise iakhawunti.
Nje ukuba ugqibile uya kuthi emva koko ubeke i-ETH kutshintshiselwano kwi-Coinbase. Emva kokuba idiphozithi iqinisekisiwe ungathenga i-SWFL kumbono wotshintshiselwano.
Tshintshisa iMarike yokuThengisa Isango.io (ixhaswe) I-MEXC yeHlabathi (ixhaswe) Binance (ixhaswe) Ukungatshintshi (V2) I-SWFL / INDLELA
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela nje ukuba i-SWFL idweliswe apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Uyithenga njani imali yengqekembe kuthi
I-Binance yindawo yotshintshiselwano eyaziwayo e-cryptocurrency eyaqalwa e-China kodwa emva koko yahambisa ikomkhulu labo kwi-crypto-friendly Island yaseMalta kwi-EU. I-Binance ithandwa kwi-crypto yayo ukuya kwiinkonzo zokutshintshiselana nge-crypto. I-Binance iqhume kwindawo yemania ye-2017 kwaye ukusukela ngoko yaba lutshintsho oluphezulu lwe-crypto emhlabeni. Ngelishwa, iBinance ayivumeli abatyali zimali baseMelika ke sincoma ukuba ubhalise kolunye unaniselwano esilucebisayo kweli phepha.
UGate.io lutshintshiselwano lwemali yaseMelika yedijithali olusungule i-2017. Njengoko utshintshiselwano lungumMelika, abatyali zimali baseMelika banokuthi bathengise apha kwaye sicebisa abathengisi baseMelika ukuba babhalise kolu tshintshiselwano. Olu tshintshiselwano luyafumaneka ngesiNgesi nangesiTshayina (eyokugqibela iluncedo kakhulu kubatyali mali baseTshayina). Isango.io eyona nto iphambili yokuthengisa kukhetho lwabo olubanzi lwezibini zokurhweba. Unokufumana uninzi lwee-altcoins ezintsha apha. UGate.io ukwabonisa ivolumu yokurhweba enomtsalane. Phantse yonke imihla yenye yeendawo zokutshintshiselana ezingama-20 ezinezinga eliphezulu lokurhweba. Ixabiso lokuthengisa lifikelela kwi-approx. I-USD 100 yezigidi mihla le. Ezona zibini ziphambili kurhwebo kwi-Gate.io ngokwevolumu yokuthengisa zihlala zine-USDT (iTether) njengenxalenye enye yezi zibini. Ke, ukushwankathela oku kungasentla, inani elikhulu leGate.io lokurhweba ngababini kunye nokuthengiswa kwayo okungaqhelekanga zizinto zombini ezinomtsalane kolu tshintshiselwano.
Umtya ohambelana nomtya python
ILedger Nano S
Kulula ukuseta kwaye ujongano oluhle
Ingasetyenziswa kwiidesktops nakwiilaptops
Ubunzima kwaye obuphathekayo
Inkxaso uninzi lweebhloko kwaye uluhlu olubanzi lwe (ERC-20 / BEP-20)
Iilwimi ezininzi ziyafumaneka
Yakhelwe yinkampani esekwe kakuhle efumaneka kwi-2014 ngokhuseleko olukhulu lwe-chip
ULedger Nano X
Inamandla ngakumbi into ekhuselekileyo ye-chip (ST33) kuneLedger Nano S
Ingasetyenziswa kwidesktop okanye kwilaptop, okanye kwi-smartphone nakwithebhulethi ngokudityaniswa kweBluetooth
Ikhaphukhaphu kwaye iyaphatheka kunye nebhetri eyakhelweyo egcwalisekayo
Indawo eninzi yokugcina kuneLedger Nano S
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-SWFL yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokugcina zikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kweintanethi kwidilesi yoluntu nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye uyigcine ikhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
Isipaji sehardware apha ngokuqinisekileyo lukhetho olungcono lwezipaji ezibandayo. Zihlala zizixhobo ezinikwe amandla i-USB ezigcina ulwazi oluphambili lwesipaji sakho ngendlela eyomelele ngakumbi. Zakhiwe ngokhuseleko kwinqanaba lomkhosi kwaye ii-firmware zazo zihlala zigcinwa ngabavelisi bazo kwaye ngenxa yoko zikhuselekile ngokugqithileyo. ULedger Nano S kunye noLedger Nano X kwaye zezona zikhetho zidumileyo kolu luhlu, ezi wallets zixabisa malunga ne- $ 50 ukuya kwi- $ 100 ngokuxhomekeke kwiimpawu abazinikelayo. Ukuba ubambe iiasethi zakho ezi wallets zityala imali ngokoluvo lwethu.
Unxibelelwano oluKhuselekileyo oluKhuselekileyo
Ngenxa yobume bemali ye-imali yedatha- eyabelwe abasemagunyeni, oko kuthetha ukuba abasebenzisi bali-100% abanoxanduva lokusingatha iiasethi zabo ngokukhuselekileyo. Ngelixa usebenzisa isipaji sehardware ikuvumela ukuba ugcine ii-cryptos zakho kwindawo ekhuselekileyo, usebenzisa uqhagamshelo lwe-VPN oluntsonkothileyo ngelixa uthengisa kwenza kube nzima kubaduni ukuba babambe okanye baphakamise ulwazi lwakho olubuthathaka. Ngokukodwa xa uthengisa ekuhambeni okanye kudibaniso lweWifi yoluntu. I-NordVPN yenye yezona zihlawulwe kakhulu (qaphela: ungaze usebenzise naziphi na iinkonzo zasimahla zeVPN njengoko zinokufunxa idatha yakho ekubuyiseleni inkonzo yasimahla) Iinkonzo zeVPN phaya kwaye sele ikho phantse ishumi leminyaka. Inika unxibelelwano olufihliweyo kumgangatho webutho lomkhosi kwaye unokukhetha ukungena ukubhloka iiwebhusayithi ezinobungozi kunye neentengiso kunye nenqaku labo leCyberSec. Unokukhetha ukunxibelelana neeseva ezingama-5000 + kumazwe angama-60 + kwisiseko kwindawo okuyo, ekuqinisekisa ukuba uhlala unonxibelelwano olugudileyo nolukhuselekileyo naphi na apho ukhoyo. Akukho bandwidth okanye imida yedatha ethetha ukuba ungayisebenzisa le nkonzo kwiindlela zakho zemihla ngemihla ezinje ngokuhambisa ividiyo okanye ukukhuphela iifayile ezinkulu. Kwaye iphakathi kwexabiso eliphantsi iinkonzo ze-VPN phaya (kuphela i-3.49 yeedola ngenyanga).
ISurfshark yeyona ndlela inexabiso eliphantsi ukuba ufuna unxibelelwano olukhuselekileyo lweVPN. Nangona iyinkampani entsha ngokuthe kratya, sele inamaseva angama-3200 + asasazwe kumazwe angama-65. Ngaphandle kweVPN ikwanazo nezinye izinto ezipholileyo kubandakanya i-CleanWeb ™, ethi ibambe iintengiso, abahloli, malware kunye neenzame zobuqhetseba ngelixa ukhangela isikhangeli sakho. Okwangoku, iSurfshark ayinayo nayiphi na imida yesixhobo ukuze usisebenzise ngokusisiseko kwizixhobo ezininzi njengoko ufuna kwaye wabelane ngenkonzo nabahlobo bakho kunye nosapho. Sebenzisa ikhonkco lokungena apha ngezantsi ukufumana isaphulelo se-81% (okuninzi !!) kwi- $ 2.49 / ngenyanga!
Sebenzisa iSurfshark namhlanje!
I-IT nomads yenze i-Atlas VPN emva kokubona ukunqongophala kwenkonzo ye-notch ephezulu ngaphakathi kwe-VPNs yasimahla. I-Atlas VPN yenzelwe ukuba wonke umntu abe nokufikelela simahla kumxholo ongathintelwanga ngaphandle kwentambo. I-Atlas VPN imiselwe ukuba yeyokuqala ethembekileyo yasimahla i-VPN enezixhobo zobuchwephesha. Ngapha koko, nangona iAtlas VPN ingumntwana omtsha kwibhlokhi, iingxelo zeqela labo lebhlog ziye zagutyungelwa ziivenkile ezaziwayo ezinje ngeForbes, Fox News, Washington Post, TechRadar nabanye abaninzi. Apha ngezantsi kukho amanye amanqaku aphambili:
I-tracker blocker ifaka iibhloko eziyingozi, iyeka ii-cookies zomntu wesithathu ekulandeleleni imikhwa yakho yokukhangela kunye nokuthintela intengiso yokuziphatha.
Idatha yoLwaphulo loLwazi ifumanisa ukuba ngaba idatha yakho yangasese ikhuselekile.
Iseva ezikhuselekileyo zikuvumela ukuba ube needilesi ezininzi ze-IP ezijikelezayo ngokudibanisa kwiseva enye
Amaxabiso aphezulu kwimarike ye-VPN (kuphela i-1.39 yeedola / inyanga !!)
Akukho mgaqo-nkqubo ukugcina ubumfihlo bakho bukhuselekile
Ngokuzenzekelayo Bulala Guqula ukuvalela isixhobo sakho okanye iiapps ekufikeleleni kwi-intanethi ukuba uqhagamshelo aluphumeleli
Unxibelelwano olungenamkhawulo ngaxeshanye.
Sebenzisa i-Atlas VPN namhlanje!
Njengoko ufumana amava amaninzi ekuthengiseni i-cryptos kuya kusiba nzima ngakumbi xa kuziwa ekulandeleleni inzuzo yakho eyinkunzi kuzo zonke ezo zorhwebo, ngakumbi xa uneakhawunti ezininzi kumaqonga ohlukeneyo orhwebo. Irhafu isusa iintlungu zokulungiselela i-bitcoin kunye ne-crypto yakho yeerhafu yexesha lakho lerhafu. Iyazenzekelayo yonke inkqubo yokufayilisha irhafu kwaye uya kuqiniseka ukuba awuyi kuphoswa naluphina ulwazi olubalulekileyo olufunekayo. Bhalisa ngokulula, gcwalisa ulwazi lwakho lomntu siqu, kwaye ungenise konke ukuthengiselana kwembali yedijithali kwiqonga. Idityaniswa ngaphandle komthungo kunye nakho konke ukutshintshiselana okukhulu kwemali yedijithali kunye namaqonga okwenza le nkqubo ikhawuleze ngokudibanisa iiakhawunti zakho ezikhoyo zotshintsho kwiqonga. Nje ukuba ukuthengiselana kungeniswe ngaphakathi, unokuvelisa iingxelo zakho zerhafu ngonqakrazo olumbalwa. I-CryptoTrader.Tax isimahla ukuba ungayisebenzisa kwaye ungaqala kwangoko kwangoko. Uya kudinga ukuhlawula kuphela ukuba ufuna ukuvelisa iingxelo zakho zerhafu.
I-Crypto Ultimatum yinkqubo yoqeqesho eneenkcukacha ebonisa indlela yokuhamba ngaphandle kwemali ukwenza imali eninzi ngeeCrypto Currencies. Inkqubo esetyenzisiweyo yathatha i-100 yeedola kwaye yajika yaya kwi-1006. Kodwa inkqubo isebenza kakuhle emva koko bathathe le-1006 yeedola bayiguqula yaba sisixa esikhulu seedola ezingama-257,000 nge-Bitcoin kunye nee-Crypto Currencies!
Into emnandi malunga noqeqesho awudingi zakhono zobugcisa. Ngapha koko, awudingi nemali eninzi kwaye ungaqala ngexabiso elingaphantsi kweedola ezili-100 ukuba unqwenela. Iveza zonke iindlela ezifihlakeleyo kwaye ikunike amandla okwenza imali xa ungumntu ogqibeleleyo. Ide ichaze nobunye bobuqhetseba ukuze ubaphephe. Iya kwi nkcukacha malunga nokuba uyaphi kwaye uyenza phi yonke le nto ithengiswayo kwaye ungayenza njani imali ngeeyure ezingama-24. Unokukhula ube ngumntu othengayo kwaye athengise iintlobo ezincinci ze-altcoins.
Ndingayithenga i-SWFL ngemali?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-SWFL eYurophu?
Ngaba akhona amanye amaqonga okuthenga i-SWFL okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-SWFL ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-ETH kuqala, kwaye ugqibezele onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-ETH yakho kutshintshiselwano lweAltCoin.
Thenga iBitcoin kubathengisi bendawo
Iinkonzo zeNgingqi yintengiselwano yontanga yeBitcoin. Yindawo yentengiso apho abasebenzisi banokuthenga kwaye bathengise iBitcoins ukuya nokubuya komnye nomnye. Abasebenzisi, ababizwa ngokuba ngabarhwebi, benza iintengiso ngexabiso kunye nendlela yokubhatala abafuna ukuyinikela. Unokukhetha ukuthenga kubathengisi abavela kwingingqi ethile ekufutshane eqongeni. emva kwayo yonke indawo elungileyo ukuba uyokuthenga iBitcoins xa ungazifumani iindlela zakho zokuhlawula oyifunayo naphi na. Kodwa amaxabiso ahlala ephezulu kweli qonga kwaye kuya kufuneka wenze inkuthalo yakho efanelekileyo ukunqanda ukuqhathwa.
Ewe, enyanisweni, iYurophu yenye yezona ndawo zilula zokuthenga ii-cryptos ngokubanzi. Kukho neebhanki ezikwi-Intanethi apho unokuvula ngokulula iakhawunti kwaye ugqithisele imali kutshintshiselwano olunje Coinbase kwaye Phakamisa .
Ukwabelana kwesikrini ngaphandle kwekhamera
Ewe. Kwakhona kulula kakhulu ukusebenzisa iqonga lokuthenga iBitcoin ngamakhadi etyala. Lutshintshiselwano olukhawulezileyo lwe-imali yedatha ekuvumela ukuba utshintshe i-crypto ngokukhawuleza kwaye uyithenge ngekhadi lebhanki. Ujongano lomsebenzisi kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye amanyathelo okuthenga acacile.
Funda ngakumbi kwiziseko zikaSwapfolio kunye nexabiso langoku apha.
ukucima njani ukuthengiselana kwi-app yecash
uyifumana njani ingqekembe yasimahla
Ndiyicima njani iakhawunti yam yeturbotax
Ukwabiwa kwescreen kwesabelo ngo-2017
Ungayithenga njani ipivx
de shaw ehlotyeni yokufunda
I-minecraft ilibele iphasiwedi kunye ne-imeyile
Uyifumana phi kwaye phi i-Krill (KRILL) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Thengisa iNdlu yam ngokukhawuleza iMiami
Iziphumo ezi-5 ezivela kwi-Excel kudliwanondlebe lokuFunda koMatshini
Uyithenga phi kwaye phi iTOP (TOP) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Uyifumana phi kwaye phi i-DADDY CAKE (DADDYCAKE) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Ndizifaka njani ii-imeyile ezindala kwiOfisi 365?
Uyilungisa njani i-AOL ye-imeyile yokuvumelanisa umba kwisicelo sembonakalo?
IPython GUI Tutorial enemizekelo- Funda iTkinter
Uyenza njani inkqubo kwi-C kwi-FreeDOS